Tambabelo Mandaso dit Marin Manohitra ny fampodiana an'ireo nihiboka taty Antananarivo
Antsika rehetra i Madagasikara fa tsy anareo mpitondra fanjakana irery tsy akory, hoy Atoa Tambabelo Mandaso dit Marin filoham-boninahitry ny fikambanana TOKOBE TELO any Toliara tafaresaka an-telefaonina tamin'ny Tia Tanindrazana omaly.
Tsy mba nakan-kevitra akory tamin'ireo fepetra noraisina amin'ny fanohizana ny "Fahamaizana ara-pahasalamana" eto Madagasikara ireo fikambanan-drazana toa an'ny Tokobe Telo misy anay. Ambarako etoana anefa, hoy izy, fa tsy mankasitraka velively ny fanapahan-kevitry ny fitondrana amin'ny hampodiana an'ireo olona efa nahavita fihiboana nandritra ny 15 andro taty Antananarivo aty amin'ny Faritra izahay ka hampitondraina aretina aty fa tokony ho tohanan'ny fitondrana sakafo izy ireo raha ny tena marina hiatrehan'izy ireo am-pitoniana ny 15 andro manaraka ao Antananarivo. Ambarako etoana, hoy Atoa Marin, fa tompon'andraikitra feno amin'ny fanapahan-kevitra noraisiny ny filohan'ny Repoblika raha misy maninona izahay aty amin'ny Faritra aty. Ambarako etoana koa fa manahirana be ny sakafo aty aminay aty atsimon'ny nosy aty aty ankehitriny noho ny fanarahana ny fepetra tsy maintsy raisina hiadiana amin'ny coronavirus izao.